Ifulethi elithi "Hérisson" elibheke i-Lake Bonlieu - I-Airbnb
Ifulethi elithi "Hérisson" elibheke i-Lake Bonlieu
Bonlieu, Bourgogne-Franche-Comté, i-France
I-Le Repaire des Hérissons ikunikeza indawo yokuhlala engu-40m2 e-Abbey endala enombono omangalisayo weLake Bonlieu, imizuzu emi-5 ukusuka ezimpophomeni zaseHedgehog kanye nemizuzu eyi-15 ukusuka eClairvaux les Lacs, eLake Doucier. Ideal for ukuphumula, zinemibala amaholide (mountain ngebhayisikili, izintaba, ukubhukuda, ukudoba, ekwehleni futhi unqamule izwe, Snowshoeing, njll), ipaki Polar Fort des Rousses (Umgede e Comté), Saltworks of Arc-et-Senans. ILake Geneva (Lausanne, Geneva). Ayikho i-wifi nenethiwekhi encane kakhulu.
I-tv engu-1 egumbini lokuhlala elinesidlali se-dvd no-1 ekamelweni elinombhede ongu-160cm "bultex good night", ikhishi elifakwe i-double induction hob, i-microwave, i-toaster, umshini wekhofi onama-pods atholakalayo, ayikho i-wifi.
Kuhlinzekwa amashidi ombhede wekamelo.
Nokho, ngicela ulethe amathawula.
4.97 · 144 okushiwo abanye
Ifulethi elisenhlizweni yemvelo elibheke e-Lac de Bonlieu, ukuchayeka eningizimu, enhliziyweni yesifunda saseLakes.
Owayengumthengisi wewayini u-sommelier, ngingakunikeza amakheli angcono kakhulu ukuze uthole iwayini le-Jura kodwa noshizi, futhi ngiyazazi izindawo ezinhle zokudoba kanye nezindawo zokudlela ezihamba phambili.
Hlola ezinye izinketho ezise- Bonlieu namaphethelo